Vaky nitresaka ilay botry nitondra olona 30: mpandeha sivy maty, roa tsy hita popoka | NewsMada
Par Taratra sur 21/04/2021
Zandary, mpampivelona, delegen’ny kaominina, mpianatra, zazakely… Anisan’ireo mpandeha 30 tamin’ilay botry tra-doza, rendika tao amin’ny vinany Tambohorano, distrikan’i Maintirano, afakomaly. Sivy ny fantatra hatramin’izao fa namoy ny ainy, raha 19 ireo avotra soa aman-tsara. Roa hafa kosa mbola karohitra hatramin’ny omaly.
Hatramin’ny ora nanoratanay farany, miisa sivy ireo namoy ny ainy tamin’ny lozan-dranomasina niseho tao amin’ny vinany Tambohorano. 19 ireo velona aina ary miisa roa ireo mbola karohina; zandary iray sy tovovavy mpianatra iray.
Niseho ny alatsinainy teo tokony ho tamin’ny 3 ora tolakandro ity loza an-dranomasina ity. Nisy tsy fahatomombana ny lafiny teknikan’ilay botry atao hoe « Nany » ka voatery nijanona. Tao anatin’izay, nahery ny onjan-dranomasina izay tafakatra mihitsy hatramin’ny 2 metatra. Teo ihany koa ny herin’ny rivotra. « Rehefa niditra an’i Tambohorano, simba ny “pompe à eau” ka nijanona ary namboarina izany. Taorian’izay, nanodina ny botry ireo mpanamory. Teo no tsy nifandray ny baiko teo amin’ny “guide” sy ny “commandant” ka tafalatsaka tao avaratra ny botry ary tsy afaka intsony », hoy ny fanazavan’ilay mpandeha iray. Vokany, vaky roa ny botry ary ny gorodona vaky no nitazonan’ireo mpandeha 13 isa tamin’izany. Taorian’izay, mpandeha iray atao hoe Mahay Florent no nampandre ny zandary. Ireto farany indray, nanentana ny fokonolona hanao vonjy aina ireo tra-doza. Niainga avy hatrany ny sambokely roa haingam-pandeha nanavotra ireo niharam-boina. Voatery natsahatra anefa izany rehefa tsy ampy ny fahitana tamin’ny alina. Mbola nitohy omaly maraina ny fikarohana ka mpandeha 19 isa no hita velon’aina. “Isan’izany ny mpanamory ilay botry sy ny mpanampy azy roa lahy ary ny G2C Ratiarisoa Fréderic Distephano miasa ao Besalampy samy avotra”, hoy ny Zandarimarian’i Melaky.
Tsy nahazo alalana nandeha
Nahery ny tso-drivotra tao an-toerana tamin’io fotoana io. Efa tsy nahazo alalana hanainga avy tamin’ny APMF ilay botry noho ny haratsian’ny toetr’andro. Nanainga tao Maintirano ihany anefa ilay tefitefy « Nany », tokony ho tamin’ny 2 ora maraina ary nitondra mpandeha manodidina ny 30 isa. “Isan’izany ireo namoy ny ainy, nahitana zaza vao roa sy telo taona avy”, hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray.
Maty tamin’ity loza an-dranomasina ity ny zandary GHC Ravelontsoa Jean Justin, teraka ny 25 mey 1975, tao Port-Berger. Manan-janaka telo ny lehilahy. Tra-doza tamin’izany koa ny mpampivelona handeha hiasa ao Bebaboky atao hoe Rasoamampionona Florencia Ludivine Marie, teraka ny 14 jolay 1993 tao Maintirano. Ny delegen’ny kaaminina Besalampy, Razafindrahety Thérèse, sy ny zanany roa. Isan’izany koa Rafaravavy Beriny Eliza, zana-drahavavin’ny delegen’ny kaominina Besalampy. Namoy ny ainy ihany koa ny ankizy iray, i Flotenia, atao hoe Mama vao sivy taona monja.
Mbola tsy hita kosa ny zandary G2C Mamilaza Edy Francklin, teraka ny 24 jolay 1993 tao Mandritsara. Manambady ary manan-janaka iray ny lehilahy. Mbola karohina ihany koa i Landrenah, tovovavy mpianatra.